कारोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा एन्टिजेन परीक्षणमा सरकारको जोड, कति विश्वसनीय ?
काठमाडौं । पछिल्लो समया नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेपछि सरकारले एन्टिजेन परीक्षण विधिलाई प्राथमिकता दिएको छ । खासगरी हटस्पटहरू पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी भारतबाट भित्रिने र उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा एन्टिजेन विधिबाट कोभिड–१९ पहिचानका लागि यो विधि अपनाउन थालिएको छ ।
के हो एन्टिजेन परीक्षण विधि ?
एन्टिजेन विभिन्न सरुवा रोगको नतिजा परीक्षणमा प्रयोग हुने र्‍यापिड डाइग्नोसिस टेस्ट आरटीडी विधि हो । किटद्धारा परीक्षण गरिने यो विधिमा नतिजा आधा घण्टामा नै आउने भएकाले मास परीक्षणका लागि विश्वका अधिक्तम मुलुकमा प्रयोग भएको पाइएको छ ।
एन्टिजेन विधि किटद्धारा (अन द स्पोट ) गरिने परीक्षण हो । यो परीक्षणका लागि नमूनाको रूपमा व्यक्तिको स्वाब लिइन्छ । कोभिड–१९ को परीक्षणमा कुन विधि कति विश्वसनीय भन्ने कुराको निर्धारण किटको टेस्ट सेन्सिभिटीले निर्धारण गर्छ । टेस्ट सेन्सिभिटी भनेको नमूनामा भएको रोग वा संक्रमण पुष्टी गर्नसक्ने किटको क्षमता हो । एन्टिजेन किटमा टेस्ट सेन्सिभिटी औसतमा ५० देखि ८० प्रतिशत हुन्छ ।
वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनकाअनुसार एन्टिजेन परीक्षण कोभिड संक्रमण धेरै संख्यामा फैलिएको बेला उपयुक्त परीक्षण विधि हो । तर यसले भाइरल लोड धेरै भएपछि अर्थात् संक्रमण छिप्पिइसकेको अवस्थामा नतिजा नेगेटिभ देखाउन पनि सक्छ । बढीमा एक हप्तासम्मको संक्रमणलाई पोजेटिभ देखाउँछ भने त्यसपछिको नतिजा नेगेटिभ देखाउन पनि सक्छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा एन्टिजेन विधिबाट आएको नेगेटिभ आएको नतिजा पीसीआर गर्दा पोजेटिभ पनि देखिनसक्छ ।
विश्वमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिन सुरु हुँदाको अवस्थामा बेल्जियममा चीन, हङकङमा भारत लगायतका मुलुकमा प्रयोग भएको थियो ।
नेपालमा एन्टिजेन परीक्षणको अभ्यास
नेपालमा यसअघि मंसिर अन्तिममा एन्टिजेन परीक्षण विधि प्रयोग गरिएको थियो । काठमाडोंका हटस्पटहरूमा करिब एक साता यो परीक्षण विधि अपनाइएको थियो । देशैभर एन्टिजेन विधिबाट कोभिड परीक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशमा तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो ।
सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत पुसभरीमा तीन लाख जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने लक्ष राखेको थियो । तर संक्रमण दर ओरालो लाग्दै गएको अवस्थामा एन्टिजेन विधि नेपालका लागि प्रभावकारी ठहरिएन । ६ हजार ३१९ जनाको परीक्षण गरेपछि पुस नबित्दै एन्टिजेन परीक्षण अभियान स्थगित गरिएको थियो ।
कहाँबाट कति एन्टिजेन किट ल्याइयो ?
स्वास्थ्य सेवा विभागकाअनुसार नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक लाख किट, यूनडीपीले ५० हजार र यूनिसेफले ५० हजार किट उपलव्ध गराएको थियो । पुसको दोस्रो साता एसियाली विकास बैंक र अन्य दातृ निकायको सहयोगमा प्राप्त भएको इमरर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्ट अन्तर्गत तीन थान किटका लागि विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अनुदान पाएको विज्ञापनमा उल्लेख गर्दै ३० दिनको म्याद राखेर ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम माग गरिएको थियो । तर अनुदानको एन्टिजेन किट नै प्रयोगविहीन भएपछि थप एन्टिजेन किट खरिद प्रक्रियाबाट पछि हट्दै गत पुस २४ गते दोस्रो सूचना जारी गरेर विभागले बोलपत्र रद्ध गर्‍यो ।
अहिले संक्रमण दर बढ्दै गएपछि थप तीन एन्टिजेन किट खरिदका लागि युनिसेफमार्फत् पहल थालिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । “अहिले विभागसँग भएको किट माग भएअनुसार अस्पताल र हटस्पटहरूमा पठाउने गरेकाछौं, देशैभरी यो विधि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले फेरि तीन लाख थान किट ल्याउन पहल गरिँदैछ,” डा. पौडेलले भने ।
घनश्याम पथिक घरमा सबैको फर्‍याकफुरुक र दौडधुप बेग्लै छ । बुवा र दादा ढकने पकाउने बन्दोबस्तमा लाग्नुभयो । आमा र फुपू... ८ घण्टा पहिले
उदय निरौलाका दुई कविता
यो पोस्ट मोर्डानिजम हो सानै भैँचालो नसहने घर बनाउनुभन्दा त बाँसको टाटी राम्रो सालिम्बोको लाछी राम्रो किन उठाउनु बडेमाको कंक्रिट आजकल घरहरू यस्तै बनाउँछन् साथीहरू लडी... ९ घण्टा पहिले
प्रज्ञा नेपाली लोककथा (लोककथा संकलन : सं. डा. देवी नेपाल) लोककथाले प्रायः हरेकलाई छुन्छ । किनकि, लोककथा मानिसको बाल्यकालसँग जोडिएको हुन्छ । युवा,... १० घण्टा पहिले
देवेन्द्रका हजुरबा साइकल चढ्थे । उनका बुवा पनि साइकल चढेरै काममा सहर आउँथे । उतिखेर काठमाडौंको उत्तरपूर्वी काँठक्षेत्र आरुबारीका बासिन्दा... १० घण्टा पहिले